Ka ọ dị ugbu a, ewere m nyochaa mkpirikpi nyocha usoro nchọpụta, nke onwe ya bụ isiokwu gbasara ọgwụgwọ ogologo oge (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Ọ bụ ezie na usoro a zuru ezu, ọ na-emekarị ka ndị nchọpụta leghara ihe dị mkpa anya: ụgwọ. Ọ bụ ezie na ọnụahịa-nke a ga-atụle ma ọ bụ oge ma ọ bụ ego-na-adịghị ahụkebe ka ndị ọkà mmụta sayensị tụlere n'ụzọ doro anya, ọ bụ ezigbo nrụgide nke a ekwesịghị ileghara anya. N'ezie, ọnụ ahịa dị mkpa maka nyocha nile nke nyocha (Groves 2004) : ọ bụ ihe mere ndị nchọpụta ji atụle ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ karịa mmadụ dum. Nanị otu obi na-etinye uche na imebi njehie mgbe ọ na-eleghara ego anya kpamkpam abụghị mgbe nile ka anyị nwere mmasị kachasị mma.
Enweghi ike ịhụ ihe na-ezighị ezi na-egosi na ọrụ nchịkọta nke Scott Keet na ndị ọrụ ibe ya (2000) na-emetụta mmetụta nke arụ ọrụ ubi dị oke ọnụ na ibelata nkwụsịghị na nyocha ekwentị. Ndị ọkà mmụta na ndị ọrụ ibe ha na-agba ọsọ abụọ ọmụmụ ihe, otu na-eji usoro nhazi "ọkọlọtọ" na otu na-eji usoro nchịkọta "rigorous". Ihe dị iche n'agbata ọmụmụ abụọ ahụ bụ ego nke mgbalị ịbanye na ndị nabatara na ịgba ha ume ka ha soro. Dịka ọmụmaatụ, n'ọmụmụ ihe ahụ na nchịkọta "nrugharị," ndị nchọpụta na-akpọkarị ezinụlọ ndị a na-amụ amụ ugboro ugboro ma mee ogologo oge ma mee ka ndị ntinye aka na-azaghachi ma ọ bụrụ na ndị na-eso ụzọ jụrụ mbido. Mgbalị ndị a mere n'ezie mepụta ọnụ ọgụgụ dị ala nke ndị na-abụghị ndị na-ekwu okwu, ma ha gbakwunyere na ọnụ ahịa ahụ. Ọmụmụ ihe site na iji usoro "rigorous" bụ okpukpu abụọ ka ọ dị oké ọnụ na asatọ ugboro iji nwayọọ. Ma, na njedebe, ọmụmụ abụọ ahụ mepụtara atụmatụ yiri nke ahụ. Ihe omuma a, yana ntughari ihe dika ihe ndi ozo (Keeter et al. 2006) , kwesiri iju gi anya: ayi ka ayi choro nyocha abuo ma obu otu nyocha? Kedu maka nyocha iri na ụma ma ọ bụ nyocha ọ bụla? Kedu ihe nyocha 100 ma ọ bụ nyocha ọ bụla? N'oge ụfọdụ, uru ị ga-eri ga-abụrịrị nsogbu, nchegbu na-enweghị isi banyere àgwà.
Dịka m ga-egosi na izu ụka a, ọtụtụ n'ime ohere ndị ahụ na-emepụta oge na-adịbeghị anya na-eme atụmatụ na o doro anya na o nwere njehie dị ala. Kama nke ahụ, ohere ndị a na-achọ ịtụle ọnụọgụ dị iche iche nakwa banyere ịme atụmatụ ngwa ngwa ma dị ọnụ ala, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ ga-abụrịrị njehie. Ndị na-eme nchọpụta bụ ndị na-esi ọnwụ na-eche naanị banyere otu ihe na-eme ka ha ghara imebi ihe na-ezighị ezi na-agabiga na ohere ndị na-akpali akpali. N'iburu nzụlite a banyere usoro nchịkọta nchọpụta zuru ezu, anyị ga-atụgharị ugbu a na mpaghara atọ nke oge nke atọ nke nyocha nchọpụta: ụzọ ọhụrụ na-anọchite anya (ngalaba nke 3.4), usoro ọhụụ ọhụrụ iji nweta ihe (ngalaba nke 3.5), na usoro ọhụrụ maka ijikọta nnyocha nwere nnukwu isi mmalite data (ngalaba 3.6).